Barnaamijka waxbarashada ee CISP
Barnaamijka waxbarashada ee CISP waxaa uu ka kooban yahay laba waxyaabood oo waaweyn:
Waxbarashada hore iyo tan aasaasiga ah
Farsamo iyo waxbarasho dadban
Waxbarashada ka horreysa tan aasaasiga ah iyo waxbarashada aasaasiga ah
80% carruurta Soomaaliyeed dugsi ma tagaan sababo ay ka mid yihiin saboolnimo, tas-hiilaad la’aan, barokaca qoysaska, takoorka dheddig-laboodka ku dhisan iyo ka-tirsanaanshaha ay ka tirsan yihiin kooxaha nugul iyo kuwa laga tiro badan yahay ama qoysas reer guuraa ah daraaddood. Si wax looga qabto arrimahan, ayaa barnaamijka CISP waxaa uu diiradda saaraa degaamada miyiga ah ee fog ee la dayacay, waxaa uu wax ka qabtaa baahiyaha daaqsatada reer guuraaga ah iyo Dadka Gudaha Ku Barokacay, waxaana uu isku xiraa dugsiyada qur’aanka iyo dugsiyada aasaasiga ah ee waxbarashada tooska ah.
Xaqiiqooyin iyo tiroooyin:
Sanadka 2011ka, waxqabadyada waxbarashada ka horreysa tan aasaasiga ah iyo waxbarashada aasaasiga ah ee CISP waxaa ay gaari doonaan:
8,262 carruur ah (kuwaas oo 50% ay gabdho yihiin oo 15% ay Dad Gudaha Ku Barokacay yihiin);
48 dugsi (39 dugsiyo la wada dhigto ah iyo 9 dugsiyada xerooyinka Dadka Gudaha Ku Barokacay ah);
Shan Degmo (saddex ku yaalla Galgaduud iyo labo ku yaalla Koonfurta Mudug);
Macaahid waxbarasho oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin: dugsiyada waxbarashada tooska ah ee aan diinta ku dhisneyn, xarumaha barashada qur’aanka, dugsiyo ku-meelgaar ah oo kuwa barokacayaasha iyo kuwa reer-guuraaga ah, kuwaas oo badidoodu ay ku yaallaan degaamada miyiga ah, fog iyo kuwa dadkoodu la riixo ah.
Dhisidda iyo dayactirka tas-hiilaad waxbarasho iyo kuwo fayadhowrka iyo nadaafadda biyaha ah oo gabdhaha u habboon;
Bixinta agab waxbarasho;
Dhiirrigelinta (lacageed) macallimiinta;
Tababar ku saabsan hababka wax-dhigista iyo xuquuqaha carruurta
Kor u qaadista wacyiga dadweynaha ee ku aaddan muhiimadda ay leedahay in si joogto ah loo tago waxbarashada tooska ah ee dugsiyada aasaasiga ah;
Tababar ku saabsan dhiirrigelinta nabadda iyada oo sal looga dhigayo dugsiyada iyo bulshada;
Sameynta guddiyo ilaalin iyo kuwa dheddig-laboodka;
Munaaqasho kooxo gaar ah ay yeeshaan iyo xog-ururin.
Tababar farsamo iyo waxbarashada dadban
Soomaaliya shantii qof ee dhallinyaro iyo dadwaaweyn ahiba keliya mid ka mid ah ayaa wax akhrin-qori kara, ragga da’da yar ayaa halis weyn ugu jira in ay ku lug yeeshaan iskahorimaad hubeysan, oo haweenkana waxaa ay halis ugu jiraan in lagula kaco rabshad ku dhisan dheddig-labood.	Iyada oo ku qanacdey in nabadda iyo horumarku ay inta badan ku xiran yihiin in dadku ay noqdaan kuwo wax akhrin-qori kara iyo in ay haystaan xirfadaha nolosha ee muhiimka ah, CISP waxaa ay ku dhaqaaqdey in ay caawiso dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee Soomaaliyeed iyada oo ku qalabeysey akhris-qoraal shaqeynaya iyo xirfado farsamo.
Mashruuca CISP ee Waxbarashada iyo Tababarka Farsamada ee Kor-u-qaadista Degdegga ah ee Shaqo-helista/ Vocational Education and Training for Accelerated Promotion of Employment (VETAPE) ayaa bilowodey 2009kii waxaana uu waqtigan gaarayaa:
Ilaa 3,000 dhallinyaro Soomaali ah (kuwaas oo ugu yaraan 70% ay haween yihiin);
6 degmo (afar Galgaduud ku yaalla, mid Koonfurta Mudug ku taalla iyo mid Hiiraan ku taalla);
Mashruuca VETAPE waxaa uu ka kooban yahay shaqo-ku-tabarasho nooc gaar ah, waxaana ka mid ah: najaarnimo, fuundnimo, dhar-tolid iyo daabaca dharka, koronto-yaqaan guud, farsamo-yaqaanka baabuurta, kaalkaaliyenimo caafimaad, farsamo yaqaan waxgaarsiinta, tubiistenimo, barnaamijyada kombuyutarka iyo xirfadaha xoghaynta, iyada oo lala kaashanayo sharikadaha iyo adeeg-bixiyeyaasha degaanka ka jira.
Waxbarashada dadban, oo ay ka mid yihiin barnaamijyo akhris-qoraalka iyo xisaabta fudud ah oo loogu talogaley dadka waaweyn oo waxbarashada dhexda ku joojiyey. Barnaamijyadan waxaa ay fursado waxbarasho ay siiyaan dhallinta iyo dadka waaweyn ee dugsiyada dhexda uga harey. Waxaa inta badan lagu sameeyaa xarumaha waxbarshada bulshada, iyaga oo badanaaba ah kuwo lagu xiro oo shuruud u ah tababarrada farsamo.
Tababar farsamo: oo looga danleeyahay in dhallinta iyo dadka waaweyn looga dhigo muwaadiniin wax soo saara oo isku filan, iyada oo farsamo la barayo iyo iyada oo la siinayo tababarro u habboon baahiyaha dhaqaale ee degaanka ka jira. CISP waxaa ay sidoo kale bixisaa tababar ganacsiga la xiriira (Eeg sidoo kale Xarumaheenna Adeegga Macluumaadka Ganacsiga/Business Information Service Centres - BISC).
Eeg Bogga macluumaadka VETAPE.